Wararkii ugu dambeeyay xiisadda ka taagan Beledweyne (SAWIRRO) | Dhacdo
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay xiisadda ka taagan Beledweyne (SAWIRRO)
Wararkii ugu dambeeyay xiisadda ka taagan Beledweyne (SAWIRRO)
Wararka ka imaanaya Magaalada Beledweyne ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in xaalad kacsanaan ahi ay caawa ka jirto magaaladaasi.
Tani ayaa ka dambeysay, ka dib markii ciidan ka tirsan kuwa Xoogga Dalka ay la wareegeen Xarunta Maamulka Gobolka Hiiraan iyo Xerada Lama Galaay.
Goobaha ay la wareegeen ciidamadan ayaa waxaan ka dhicin wax iska horimaad ah, sida ay soo sheegayaan Wariye-yaasha.
Ciidamadan ayaa waxaa horkacaya Sarkaal ka tirsan Qaybta 27aad ee Ciidanka Xoogga Dalka oo lagu magacaabo Korneyl Cabdullaahi Barre Cilmi, iyadoona uu wehliyo Nuur Dheere oo horey u soo noqday Gudoomiye Kuxigeenka Dhinaca Amniga ee Gobolka Shabellaha Dhexe.
Iyadoo magaalada ay maalmahaanba ku sugnaayeen Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliya, General Mukhtaar Xuseen Afrax, Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka iyo Taliyihii hore ee Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA), Cabdullaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) oo xal u raadinayay khilaafka Hirshabelle ayaa waxay Saraakiishan sheegeen inay ka soo horjeedaan in si xoog ahi lagu maamulo Gobolka Hiiraan.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidamadan ka soo horjeedaan safar la sheegay in berrito uu Madaxweynaha Hirshabelle, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe) ku tagayo magaaladaasi.
Dhanka kale dad u badan taageere-yaasha General Abuukar Xaaji Warsame (Xuud) ayaa caawa isugu soo baxay wadooyinka Magaalada Beledweyne, iyagoona ka wada bannaanbax ay ku soo dhaweynayaan militariga gadoodka sameeyay
General Xuud oo horey uga tirsanaa Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka ayaa ka horyimid hannaankii loo maray doorashadii 11-kii bishii November ee sanadkii hore ka dhacday Magaalada Jowhar, laguna soo doortay Madaxweye Guudlaawe.
Dowlad Goboleedka Hirshabelle iyo Maamulka Gobolka Hiiraan ayaan weli ka hadlin xaaladda caawa ka taagan magaaladaasi.
Previous articleXaaladda Magaalada Beledweyne oo caawa kacsan
Next articleFarmaajo oo daahfuray munaasabadda Hirgelinta Guddiga 4aad ee Af Somaliga